इजकिएल 28 ERV-NE - टायर यो एउटा - Bible Gateway
टायर यो एउटा परमेश्वर जस्तै सम्झन्छ
28 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नुभयो,2“हे मानिसको छोरो, टायरको राजालाई भन, ‘परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘तिमी धेरै घमण्डी छौ!
अनि तिमी भन्छौ, “म एउटा देवता हुँ!
म समुद्रको माझमा,
देवताहरूको आसनमाथि बस्छु।”
“‘तर तिमी एउटा मानिस मात्र हौ परमेश्वर होइनौ।
तिमी आफैंलाई एक देवता जत्तिकै सम्झन्छौ।
3 तिमी सोच्छौ कि तिमी दानियल भन्दा बुद्धिमान छौ!
तिमी सम्झन्छौ कि तिमीले सारा रहस्यहरू जानेकाछौ।
4 आफ्नो बुद्धि र ज्ञानबाट तिमीले सम्पत्ति कमायौं
अनि तिमीले आफ्नो भण्डारमा सुन-चाँदी राख्यौं।
5 आफ्नो तीव्र बुद्धि अनि व्यापारले गर्दा तिमीले सम्पत्ति बढायौं,
अनि त्यो सम्पत्तिले गर्दा तिमी घमण्डी भयौं।
6 “‘यसकारण परमप्रभु मेरो मालिक भन्नुहुन्छ,
टायर, तिमीले सोच्यौं तिमी देवता जस्तै हौ।
7 म विदेशीहरूलाई तिम्रो विरूद्धमा युद्ध गर्न लगाउँछु।
तिनीहरू देश माझमा धेरै डरलाग्दा छन्,
तिनीहरूले आफ्नो तरवार बाहिर निकाल्नेछन्
अनि ती सुन्दर चीजहरूको विरूद्धमा चलाउनेछन्,
जुन तिमीले आफ्नो बुद्धिले कमायौं।
तिनीहरूले तिम्रो गौरवलाई ध्वंश गरिदिनेछ।
8 तिनीहरूले तिमीलाई तल चिहानमा पुर्याउनेछन्।
तिमी त्यो व्यापारी जस्तै हुनेछौ जो समुद्रमा मर्यो।
9 त्यो मानिसले तिमीलाई मार्नेछ।
के अहिले सम्म तिमी भन्छौ, “म देवता हुँ?”
त्यससमय उसले तिमीलाई आफ्नो अधिकारमा लिनेछ।
त्यस समय तिमीले सम्झनेछौं कि तिमी मानिस मात्र हौं, परमेश्वर होइनौ।
10 तिमी परदेशीहरूको हातमा बेखतनाको मानिस झैं मर्नेछौ।
यो हुने नै छ किनभने मैले यस्तो भनेकोछु।’”
परमप्रभु मेरो मालिकले यी सब भन्नुभयो।
11 परमप्रभु मेरो मालिकको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, 12 “हे मानिसको छोरो, टायरको राजाको विषयमा दु:खपूर्ण गीत गाऊ। उसलाई भन, ‘मेरो स्वामी परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘तिमी आदर्शवाद मानिस थियौं,
तिमी बुद्धिले परिपूर्ण थियौं, तिमी पूर्णत सुन्दर थियौ।
13 तिमी अदनमा थियौं, परमेश्वरको बगैंचामा,
तिमीसँग प्रत्येक बहुमूल्य रत्न थियो,
माणिक, लालमणि, पुष्पराज, पन्ना, पीनमणि, हीरा, फिरोजा,
गोमेद, आनिकस, जस्पर नीलम, हरितमणि अनि नीलमणि,
अनि हेरक रत्नमा सुन जडिएको थियो।
तिनीहरूलाई यो सुन्दरता दिएको थियो
जुन दिन तिम्रो सृजना गरिएको थियो,
तिनीहरू तिम्रो लागि तयार गरिए।
परमेश्वरले तिमीलाई बलियो बनाउनुभएको थियो।
14 तिमी चुनिएका करूब स्वर्गदूत थियौं।
तिम्रो पखेंटा मेरो सिंहासन सम्म फैलिएको थियो
अनि मैले तिमीलाई परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा राखें।
तिमी त्यो रत्नको बीचमा हिँड्‌यौ जुन आगो जस्तै दन्किरहेको थियो।
15 तिमी असल अनि ईमान्दार थियौं जब मैले तिमीलाई बनाएँ।
तर त्यसपछि तिमीमा दुष्ट कुरो पाइयो।
16 तिम्रो व्यापारले तिमीकहाँ धेरै सम्पत्ति ल्यायो
तर त्यसले तिमीभित्र क्रुरता उत्पन्न गरायो अनि तिमीले पाप गर्यौं।
यसकारण मैले तिमीसँग यस्तो व्यवहार गरें,
मानौं तिमी अपवित्र चीज हौ।
मैले तिमीलाई परमेश्वरको पर्वतमा फ्याँकिदिएँ।
तिमी विशेष करूब स्वर्गदूतहरू मध्ये एक थियौ
तिम्रो पखेंटा मेरो सिंहासनमा फैलिएको थियो,
तर मैले तिमीलाई आगो जस्तो चम्किने रत्नहरू छोड्न बाध्य गराएँ।
17 तिमी आफ्नो सुन्दरताको कारण घमण्डी भयौं,
तिम्रो घमण्डले तिम्रो बुद्धि नष्ट पार्यो,
यसैकारण मैले तिमीलाई तल जमीनमा ल्याएँ
अनि राजाहरूको अघि फ्याँकें ताकि तिनीहरू तिम्रो विनाश देख्न सकुन्।
18 तिमीले धेरै नराम्रो काम गर्यौ,
तिमी अत्यन्तै कपटी व्यापारी थियौ।
यसप्रकारले तिमीले पवित्र स्थानहरू अपवित्र बनायौ,
यसैकारण मैले तिमीभित्र आगो ल्याई दिए,
यसकारण तिमीलाई आगोले जलायो,
अनि तिमी जमीनमा खरानी भयौं।
अब प्रत्येकले तिम्रो लाज देख्नेछन्।
19 “‘अरू देशको सबै मानिसहरू,
तिमीमाथि जे घट्यो, त्यसको लागि शोक ग्रस्त थिए।
तिमीमाथि जे घट्यो त्यो देखेर मानिसहरू भयभीत भए।
तिम्र अन्त भयो।’”
सीदोनको बिरूद्धमा सन्देश
20 परमप्रभुको वचन मलाई प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, 21 “हे मानिसको छोरो, सीदोनमाथि ध्यान देऊ, अनि त्यस ठाँउको विरूद्धमा मेरो लागि केही भन। 22 भन, ‘परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘सीदोन म तिम्रो विरूद्धमा छु।
तिम्रा मानिसहरूले मलाई सम्मान गर्न सिक्नेछन्,
म सीदोनलाई दण्ड दिन्छु,
त्यसपछि मानिसहरूले सम्झने छन् कि म नै परमप्रभु हुँ।
त्यसपछि तिनीहरूले सम्झनेछन् कि म पवित्र छु।
अनि मलाई तिनीहरूले त्यो रूपमा लिनेछन्।
23 म सीदोनमा रोग अनि मृत्यु पठाउँछु,
अनि मेरा मानिसहरू शहर भित्र मर्ने छन्।
शहरहरूको बाहिर तरवारले त्यो मृत्यु ल्याउँनेछ।
त्यसपछि उसले सम्झनेछ कि म परमप्रभु हुँ।’”
देशहरू इस्राएलको हाँसो उडाउन बन्द गर्ने छन्
24 “‘अतीत कालमा, इस्राएललाई त्यसको चारैतिरका देशहरूले घृणा गर्थे। अब उसो तिनीहरूको वरीपरीका सबै देशहरूबाट कष्ट दिनलाई कुनै तीखा काँढाहरू अथवा सिउँडी रहने छैन। त्यसपछि तिनीहरूले जान्नेछन् म मात्र परमप्रभु तिनीहरूको मालिक हुँ।’”
25 परमप्रभु मेरा मालिक यसो भन्नुहुन्छ, “म इस्राएल परिवारलाई जो अन्य राष्ट्रहरूमा तितर-बितर भएकाछन् म तिनीहरूलाई भेला पार्नेछु। अनि ती राष्ट्रहरूले देख्नेछन् कि म पवित्र हुँ। त्यस समय इस्राएलका मानिसहरू त्यो देशमा बस्नेछन् जुन देश मेरो दास याकूबलाई दिएँ। 26 तिनीहरू त्यो देशमा सुरक्षित रहनेछन्। तिनीहरूले घर बनाउँनेछन् अनि दाखको बोट लगाउनेछन्। म त्यसको चारैतिरको राष्ट्रहरूलाई दण्ड दिन्छु जसले तिनीहरूलाई घृणा गरे। त्यसपछि इस्राएलका मानिसहरू सुरक्षित रहनेछन्। अनि तिनीहरूले सम्झनेछन् कि म नै परमप्रभु तिनीहरूको परमेश्वर हुँ।”